Electronic and Electrical ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Thread: Electronic and Electrical ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Rep Power0ကျနော် Bandwidth အကြောင်းပါတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် စာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်လို့ ပါ
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to soethumaung BeEc For This Useful Post:
rolley, tunaungkyaw, ကိုထွန်း 03-06-2012 04:39 AM
Remark : All images here in this website are for use of educational purpose only. The owner of this web site is not responsible for the consequences in case of violation to copyright, trademark, patent or other intellectual property rights of any third party. လောင်ကျွမ်းထားပြီးသား
Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to rolley For This Useful Post:
tunaungkyaw, U Kyan Taing Aung, ကိုထွန်း, နေမင်းသွေး 05-02-2012 09:30 PM
Rep Power0ဟောင်ကောင်ရဲ့ CP၂၀၀၉ စာအုပ်လေးပါ
IEE ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ထားတာဆိုတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်
Cable factor for Trunking and Trunking factor, conduit factor တွေလဲပါတယ်
Trunking size ဘယ်လောက်မှာ Cable ဘက် size ဘယ်နှစ်ကြိုးဆံ့တယ် စတာတွေပါတယ်
Reply With Quote The Following6Users Say Thank You to alamak For This Useful Post:
akhtin, lynnthadarko, rolley, tunaungkyaw, U Kyan Taing Aung, ကိုထွန်း 05-03-2012 02:33 AM
Location Temp Bangkok
Posts 30	Thanks 127
Rep Power0ဒီစာအုပ်လေး..လင့်သေနေလို့...တားကို..တနား၇်ငလုပ်ပေးကြပါဗျာ...အဟင့်...ဟင့်
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to luhein25 For This Useful Post:
rolley, tunaungkyaw, ကိုထွန်း 05-03-2012 01:52 PM
Thanked 3,057 Times in 608 Posts
Rep Power 8 Originally Posted by luhein25
စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် ဘယ်စာအုပ်ဆိုတာလေးထည့်ပြီးတောင်းဆိုပေးရင် ဒေါင်းလုတ် လုပ်ထားတဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက်ကပြန်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
Reply With Quote The Following4Users Say Thank You to tunaungkyaw For This Useful Post:
alamak, rolley, wlk3649, ကိုထွန်း 01-12-2013 11:10 AM
Rep Power0Do u have "Digital control systems" written by B.C.Kuo? Please share me.
Reply With Quote 01-30-2013 08:52 PM
Rep Power0download link က မရတော့ဘူး
Reply With Quote 02-23-2013 04:38 PM
Rep Power0အဲယားကွန်းများေ၇၇ှည်ခံအောင်ထိမ်းသိန်းခြင်းအကြောင်းဘယ်ဆိုဒ်မှာ၇နိုင်သလဲမသိဘူး ကူညီကြပါဦး
Reply With Quote 12-22-2015 04:32 PM
Rep Power0Originally Posted by yanpye
PIC in PracticeaProject Based Approach (D W Smith)
Link ​သေ​နေလို့ ပြန်​တင်​​ပေးပါလား Thanks
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to nayminthar For This Useful Post:
htinlin, William Paul 01-13-2016 05:11 PM
Rep Power9ဒီမှာ
မရရင် ဒီမှာ ဒေါင်းကြည့်ပါခင်ဗျ
htinlin, nayminthar + Reply to Thread
Electronic engineering နှင့်ပတ်သက်သော စာအုပ်များတောင်းဆိုရန်
By htetlinnaung in forum စာအုပ်စာတမ်းများ
Last Post: 08-19-2016, 04:26 PM
GPS ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
By zener in forum အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Aero ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
By Nway Oo Ko in forum အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Last Post: 01-15-2011, 10:54 PM
Electrical And Electronic Training Centre
By samsoon in forum အခြားအခက်အခဲများ
ASP ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Last Post: 05-20-2008, 05:30 AM